Leaf Pigments Tshintsha imibala kwiimpendulo ze-Autumn
Kutheni amaqabunga ashintsha umbala ekuwa? Xa amaqabunga avela eluhlaza, kuba ziqulethe i-chlorophyll. Kukho i-chlorophyll eninzi kwiqabunga elisebenzayo kangangokuba i-green yifake enye imibala ye-pigment. Ukukhanya kulawula umveliso we-chlorophyll, ukuze iintsuku zekwindla zikhule zibe mfutshane, i-chlorophyll engaphantsi. Inqanaba lokunciphisa i-chlorophyll lihlala lihleli, ngoko umbala oluhlaza uqala ukutshabalala kumagqabi.
Ngexesha elifanayo, ukunyuka kwama-sugar concentrations kubangele ukwanda kwemveliso ye-anthocyanin pigments. Amagqabi aqukethe i-anthocyanins iya kubonakala ibomvu. I-Carotenoids enye iklasi yeengulube ezifumaneka kwamagqabi athile. Ukuveliswa kweCarotenoid akuxhomekeke ekukhanyeni, ngoko amanqanaba ayancitshiswa ngeentsuku ezimfutshane. I-Carotenoids ingabomvu, iphuzi, okanye ibomvu, kodwa ezininzi zee pigments ezitholakala kumagqabi ziphuzi. Amaqabunga anemali emihle ye-anthocyanins kunye ne-carotenoids iya kubonakala i-orange.
Amaqabunga nge-carotenoids kodwa encinane okanye akukho-anthocyanin iya kubonakala iluhlaza. Ukungabikho kwezi pigment, ezinye iikhemikhali zityalo ziyakuchukumisa umbala weqabunga. Umzekelo uquka ama-tanins, aphethwe ngumbala obomdaka weeqabunga ze-oki.
Ukushisa kuthinta izinga lokuphendula kwamakhemikhali , kubandakanye nalawo amaqabunga, ngoko kudlala inxaxheba kumbala wamagqabi. Nangona kunjalo, kumanqanaba amancinci athatha uxanduva lwemibala yamahlamvu.
Usuku lwe-autumn Sunny lufunekayo ukuze kubonakaliswe umbala ogqamile, kuba i-anthocyanins idinga ukukhanya. Iintsuku ezinqabileyo ziza kubakho kwi-yellow and browns.
Iigqabi zeLeaf kunye nemibala yazo
Masiqwalasele ngokuthe kratya isakhiwo kunye nomsebenzi wee-pigments zamagqabi. Njengoko ndithethile, umbala weqabunga awunakuboniswa kwi-pigment eyodwa, kodwa kunokuba usebenzisane neentlobo ezihlukahlukeneyo eziveliswa sisityalo.
Iiklasi eziphambili ze-pigment ezijongene nombala wamaqabunga zi-porphyrins, i-carotenoids, kunye ne-flavonoids. Umbala esiwabonayo kuxhomekeke kwisixa kunye neentlobo zeehagu ezikhoyo. Ukusebenzisana kweMikhali ngaphakathi kwesityalo, ngokukodwa ekuphenduleni i-acidity (pH) kuyachaphazela nombala weqabunga.
i-carotene kunye ne-lycopene
ophuzi, i-orange, obomvu
obomvu, obomvu, obomvu, umlingo
I-Porphyrins inesakhiwo somngcele. I-porphyrin ephambili kumagqabi yi-pigment eluhlaza ebizwa ngokuthi i-chlorophyll. Kukho iintlobo zamakhemikhali ezahlukeneyo ze-chlorophyll (oko kukuthi, i-chlorophyll kunye ne-chlorophyll b ), ejongene ne-carbohydrate synthesis in plant. I-Chlorophyll ikhiqizwa ekuphenduleni ilanga. Njengoko iinguqu zonyaka ziguquka kwaye inani lelanga liyancipha, i-chlorophyll engaphantsi iveliswa, kwaye amaqabunga avela eluhlaza. I-Chlorophyll idilizwe phantsi kwiimveliso ezilula kwizinga eliqhubekayo, ngoko umbala wamagqabi aluhlaza uya kutshabalala njengoko ukukhiqizwa kwe-chlorophyll kuyancipha.
I-Carotenoids yi- terpenes eyenziwe ngamagqununu angama-asoprene. Imizekelo ye-carotenoids efumaneka kumaqabunga ibandakanya i- lycopene , ebomvu, kunye ne-xanthophyll, ephuzi.
Ukukhanya akudingeki ukuze isityalo sikhiqize i-carotenoids, ngoko le mibala ihlala ikhona kwisityalo esiphilayo. Kwakhona, i-carotenoids iyancipha ngokukhawuleza xa kuthelekiswa ne-chlorophyll.
I-Flavonoids iqulethe i-diphenylpropene subunit. Imizekelo ye-flavonoids iquka i-flavone ne-flavol, ephuzi, kunye ne-anthocyanins, enokubomvu, eluhlaza okomvu, okanye obomvu, kuxhomekeke kwi-pH.
I-Anthocyanins, efana ne-cyanidin, inika i-sunscreen yemvelo kwisityalo. Ngenxa yokuba isakhiwo se-molecular of anthocyanin siquka ushukela, ukuveliswa kweli klasi yee pigment kuxhomekeke kubukho be-carbohydrates kwisityalo. Umbala we-Anthocyanin utshintshana nge-pH, ngoko-acidity soil ichaphazela umbala weqabunga. I-Anthocyanin ibomvu kwi-pH ngaphantsi kwe-3, i-violet kwi-values ​​ye-pH malunga ne-7-8, kunye ne-blue kwi-pH enkulu kune-11. Ukuveliswa kwe-Anthocyanin kufuna ukukhanya, ngoko ke iintsuku ezininzi zelanga ezilandelelanayo zifunekayo ukuphuhlisa iitoni ezibomvu nezibomvu.
Yintoni Ubunjineli Bomkhemikhali Ziziphi iinjineli zeMichiza?
I-Architecture yeNew York Stock Exchange, i-NYSE Building e-NYC
Izimpawu zomhlaba: iCapricorn, iTaurus neVirgo